Apple ayaa sii deysay watchOS 7.1 oo loogu talagalay dadweynaha iyadoo laga helayo warar xiiso leh | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay sii deysaa watchOS 7.1 oo loogu talagalay dadweynaha iyaga oo wata warar xiiso leh
Dhowr maalmood ka dib watchOS 7.1 on nooca hordhaca ah waxba ma ahayn, shirkadda Californian ayaa bilawday nooca dadweynaha ee cusbooneysiinta adeegsadayaasha Apple Watch. watchOS 7.1 waxay u keentaa wadashaqeynta ECG dalal cusub, ogeysiisyada heerarka dhagaha ee waxyeello u geysan kara isla markaana xalliya dhibaatooyinka la soo dersay markii aad doonaysay inaad ku furto Mac-ga Apple Watch, iyo kuwo kale.
Nooca ugu dambeeya ee watchOS 7.1 ee dhammaan isticmaaleyaasha
Kaliya laba maalmood ka dib markii la sii daayay watchOS 7.1 qaybteeda u dhow-dhamaadka, Apple ayaa sii daayay nooca ugu dambeeya ee noocyadan ah software-ka saacadaha ee dhammaan dadka isticmaala. Nooc ka kooban hawlgalka ECG (electrocardiogram) ee dalalka aan weli helin iyo astaamo kale oo cusub. Laakiin wixii ka sarreeya dhammaantood way soo bandhigaysaa xal u helida dhibaatooyin horey madax xanuun u ahaa dadka isticmaala qaarkood.
Dhibaatada aan tilmaameyno asal ahaan waa labo. Kan hore waxa loola jeedaa Awood la'aanta in lagu furo Mac iyada oo loo marayo Apple Watch. Waqti-badbaadin weyn oo muuqaal leh. Dhibaatada labaad ee ay sheegaan in la xaliyay ayaa ah mida loola jeedo shaashadda oo mugdi noqon karta marka curcurka kor loogu qaadayo qaar ka mid ah dadka isticmaala Apple Watch Series 6.
Sidaa darteed Jamhuuriyadda Kuuriya iyo Ruushka hadda waxay heli doonaan hawl ECG ah oo la heli karo iyo ogaysiisyo otomaatig ah haddii ay dhacdo wadno garaac aan caadi ahayn. Dhamaanteenna leh Apple Watch, dhibaatooyinka kor ku xusan waa la xaliyay.
Si loo xaqiijiyo haddii cusbooneysiinta laga heli karo aaladdayada, waa inaan eegnaa barnaamijka Apple Watch ee ku jira iPhone-keena, Tan waxaan u tagnaa General> Cusboonaysiinta softiweerka. Wax yar ayaan sugeynaa waana inaan aragnaa wax yar ka dib suurtagalnimada inaan ku rakibi karno Apple Watch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple waxay sii deysaa watchOS 7.1 oo loogu talagalay dadweynaha iyaga oo wata warar xiiso leh
Sida loo hubiyo booska kaydinta bilaashka ah ee Apple Watch